बाँकेमा खेलाडीलाई राहत वितरण, ग्रासरुट एकेडेमी पनि बन्दै
गोलनेपाल Jul 26, 2020 08:53
नेपालगञ्ज । बाँके जिल्ला फुटबल संघले आफू मातहतका जिल्लाका फुटबल खेलाडीहरुलाई एक कार्यक्रमका बीच राहत वितरण गरेको छ ।
कोभिड–१९ को समस्यामा परेका खेलाडीलाई थोरै भएपनि सहयोग गर्न राहत वितरण गरिएको बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले बताए । राहत वापतको रकम अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पठाइदिएको थियो ।
राहत वापत फिफाले दिएको सहयोग रकमबाटै एन्फाले आफ्ू मातहतका जिल्ला फुटबल संघहरुलाई जनही ७५ हजारका दरले राहत पठाएको थियो । सोही रकम बाँके जिल्ला फुटबल संघले ४३ जना खेलाडीलाई एक हजार सात सय ४५ रुपैयाका दरले वितरण गर्यो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १ स्थित एन्फा ग्रासरुट फुटबल स्पोर्टस एकेडेमी परिसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर खेलाडीहरुलाई राहत वितरण गरिएको थियो ।
प्रदेश सांसद एवं ओलम्पियन सुरेन्द्र हमालले बाँके जिल्ला फुटबल संघको अगुवाईमा बन्दै गरेको फुटबल संरचनाहरुको प्रशंसा गर्दै खेलाडीलाई थोरै भएपनि सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
खेलाडीहरुलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगर, वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल, एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष गोवद्र्धनसिंह सम्झना, जिल्लाका पदाधिकारीहरु गोविन्द श्रेष्ठ, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, धम्बोझी क्लवका अध्यक्ष देवेन्द्र खड्कालगायतले राहत वितरण गर्नु भएको थियो ।
स्मरण रहोस, वडाध्यक्ष रिजालको अगुवाई र संघको सक्रियतामा धम्बोझीमा ग्रासरुट एकेडेमी बनिरहेको छ । त्यही बास्केटबल कोर्ट, सफ्ट टेनिस, लनटेनिस, क्रिकेट अभ्यासस्थल पनि बनिरहेका छन् । धम्बोझीको ग्राउण्डलाई खेलाडी उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
संघले कोरोनाको माहोल शान्त भएपछि ८ देखि १२ वर्षका बच्चालाई नियमित प्रशिक्षण दिने तयारी समेत गरेको बताएको छ ।
Previous फुटबलसँगै सामाजिक दायित्व पूरा गर्दै लिस्नु
Next दाङका खेलाडीहरुलाई पनि राहत